Mitsidika an'i Londres sy Edinburgh | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny London sy Edinburgh
Mariela Carril | | Inona no ho hita, United Kingdom
Ny Nosy Britanika dia toerana fitsangatsanganana tsara: eo ny kolontsaina, ny tantara ary ny natiora hahatonga ny androntsika hahagaga. Marina fa toerana lafo vidy kokoa io raha oharina amin'ny eran'i Eropa ary tokony hanao tsara ny isa ny olona, ​​saingy tsy manakana ny mpandeha izany ka resaka fandaminana ihany.
Ny varavarana fidirana dia matetika any Londres fa anio dia manolotra a lalana mampitohy an'i Londres amin'i Edinburgh, tanàna roa mpizahatany indrindra any UK. Raha mieritreritra ny ho any amin'ity faritra ity ianao, dia azo antoka fa tena azo ampiharina ity fampahalalana ity.
Londres dia tanàna cosmopolitan ary iray izay manolotra toerana manintona mpizaha tany indrindra. Ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny fandaharana mialoha izay tianao hotsidihina satria miankina amin'ny zavatra tianao izany. Misy foana ny biraon'ny fizahantany mangataka vaovao, mividy tapakila, mangataka sarintany na mahazo trano fandraisam-bahiny na fantaro ny fomba ahafahanao mitety ny tanàna sy ny sisa amin'ny firenena.
Azonao atao Fampiharana alohan'ny fampidinana izay manamora ny fitsidihana na sarintany maimaim-poana amin'ny rafitra fitaterana. Anisan'ireo nisongadina voalohany Tsidiho i Londres (ny torolàlana ofisialy misy sarintany ivelan'ny Internet), Citymapper London (maimaim-poana), Sarintany Street Art London, App App Santander (fampiharana bisikileta maimaim-poana izay mampiseho anao fijanonana bisikileta sy làlana), App Regent Street, Riverside London App ary ny sasany hafa.
Efa niresaka imbetsaka momba ny atao hoe mitodika any London isika, ny fantsona sy ny bus ary ny karatra (Oyster na London Pass), azonao vidiana. Avelanay eto ianao manintona folo malaza indrindra any London:
Warner Bros. Studio Tour London: Fitsangatsanganana manerana ny tontolon'i Harry Potter izany ka eo amin'ny laharana 1 amin'ny lisitra.
Coca-Cola London Eye: io no kodiarana London Ferris misy kapsula maoderina 32 izay mitondra olona 25 avy. Ny tapakila dia azo vidiana amin'ny Internet avy amin'ny £ 22 isaky ny olon-dehibe.
Museum Madame Tussauds: Usain Bolt, William sy Kate, Lady Gaga ary olo-malaza manerantany…. amin'ny kinova savoka. Ny fidirana dia £ 15.
Mitsangatsangana amin'ny fitsidihana fitsidihana aotobisy: Mpizahatany sooo ve ho anao? Indraindray ity karazana diabe ity dia mendrika hatao. Maharitra 24 ora ny tapakila ary manome topy maso ny malaza indrindra ianao miaraka amin'ireo làlany efatra sy fijanonana maherin'ny 60. Fiteny maro sy sambo mitaingina Thames no tafiditra ao anatin'ny vidiny.
Tilikambon'i Londres: iray amin'ireo trano tranainy indrindra ao an-tanàna, taonjato sivy lava, ary iray amin'ireo sary malaza. Ahitana ny firavaka satro-boninahitra koa. vidin'ny fidirana £ 22.
Ny Shard: Trano maoderina izay maneho an'i Londres amin'ny karatra paositra faha-244. Izy no tranobe avo indrindra any Eropa Andrefana ary 30 metatra ny haavony. Mahatalanjona ny fomba fijery avy amin'ny tokotanin-tsandriny. Ny tapakila dia mitentina 95 pounds ary raha mividy azy amin'ny Internet 5 pounds latsaka.
Westminster Abbey: Abbey taonjato fito kanto izay satro-boninahitra satro-boninahitra mpanjaka anglisy. Misy ny mpitari-peo ary £ 20 ny fizahan-tany.
Trano-maizina any London: fampisehoana miaraka amin'ireo mpisehatra sy vokany manokana. Zavatra mahafinaritra 90 minitra mandeha amin'ny toerana mahatsiravina. 23 kilao ny tapakila.
Katedraly San Pablo: natsangana tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary ny atiny dia tsara tarehy sy tena sarobidy amin'ny kanto sy ny mozika malefaka ao anatiny. Azonao atao ny mianika ny tilikambo amin'ny tohatra miolikolika ary mahita ny tanàna. 16 kilao ny tapakila.
Aquarium SEA FIAINANA: ny marina dia toerana tsara hahafantarana ny fiainana anaty rano. Misy karazany 500 mahery, toy ny antsantsa sy haran-dranomasina. Ny tapakila dia mitentina 19 pounds.
Mazava ho azy, manolotra zavatra bebe kokoa ho antsika i Londres saingy miaraka amin'ny fotoana kely na vola dia lazainay fa amin'ireo manintona 10 ireo dia tsy maintsy fantatrao ny fomba hisafidianana.
Ny tanjonay faharoa dia Edinburgh, tanàna miavaka ary tena miovaova be satria manana sehatr'asa medieval sy ampahany amin'ny fomba Zeorziana izay mahafinaritra. Tsy isalasalana fa tanàna tsara tarehy izy io.
Fantatrao fa hanaraka ity làlana ity ianao (London, Edinburgh) torohevitra ny hividy tapakilan'ny fitaterana mialoha mba hitsitsiana vola. Imbetsaka ianao no afaka mividy azy ireo mandritra ny telo volana. Ny tolotra dia mandeha an-dalambe hatrany London, zavatra azo araraotina raha mikasa ny hiverina sy hiverina ianao, saingy satria any Angletera izy ireo dia afaka manohy ny dia.
Ny safidy mora indrindra avy any Londres mankany Edinburgh dia amin'ny bus. Manomboka amin'ny 26 pounds ny sarany fa tsy maintsy vonona handany adiny sivy eo amin'ilay lalana ianao. Niara-niasa ny National Express na Megabus. Safidy iray hafa ny fanaovana sidina mora vidy avy any Ryanair fa tokony handinika valizy ianao ary hifindra avy amin'ny seranam-piara-manidina mankany amin'ny tanàna. ihany koa misy lamasinina miala isaky ny antsasak'adiny ary manao ny dia mandritra ny adiny efatra sy 20 minitra izy ireo.
Lamasinina Izy io dia orinasa ahafahanao mamandrika hatramin'ny telo volana mialoha ary miainga avy ao amin'ny Kings Cross manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ny lamasinina. ihany koa misy lamasinina alina miaraka amina fiara fatoriana. Raha mamandrika mialoha ianao, ny tapakila dia mety mitentina 15 pounds ka hatramin'ny 40 fa raha mividy ilay tapakila ianao amin'io andro io dia mety handany anao 140 pounds.
Izao ireo Ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Edinburgh:
Castle Edinburgh: Eo an-tampon'ny Castle Rock, volokano efa lany tamingana, ary izy no sary famantarana ny tanàna sy ilay trano tranainy indrindra. Ao anatin'ireo asan'ny Fahatsiarovana ny Ady Nasionaly, misy ny Jewels Crown of Scotland sy ilay Stone of Destiny fanta-daza. Ny fidirana dia £ 16.
Ny akaiky ny Mpanjaka Maria: dia fitsangatsanganana izay mitondra antsika any amin'ny taonjato faha-15 ao an-tanàna miaraka amin'ny tantaram-pamonoana olona, ​​matoatoa ary loza mahatsiravina. Fito andro isan-kerinandro izy io, isaky ny 10 minitra manomboka amin'ny 14 maraina. 50 pounds ny vidiny ary afaka mitsidika ny tranokala ianao ary mividy azy amin'ny Internet.
Ny tranomaizina Edinburgh: fitsidihana mahafinaritra hafa fa amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ireo mpilalao sarimihetsika sy effets manokana izay mamorona endrika somary mahatsiravina avy ao an-tanàna. Misy kinova samihafa, misy litera samihafa, ary manomboka 13 pounds ny vidiny.
The Scotch Whisky Experience: Fantatra amin'ny whisky i Scotland ka noho ianao eto dia azonao atao ny mianatra momba ny fizotrany. Misy fitsangatsanganana maro azo atao ary ny vidiny dia manomboka amin'ny £ 16 mandritra ny fitsidihana 50 minitra.
Yacht Royal Britannia: Sambon'ny fianakavian'ny mpanjaka britanika mandritra ny efa-polo taona izy io ary miantsona ao amin'ny Ocean Termial any Leith. Misy fitsidihana am-peo ao anatiny ary raha tianao ny sambo dia tsara izany. Ny fidirana dia £ 15.
Lapan'ny Holyroodhouse: ny firesahana mpanjaka dia fonenan'ny Mpanjakavavy Elizabeth II any Ekosy. Tonga isan-taona amin'ny volana Jona izy io, saingy ivelan'ny vanim-potoana io dia misokatra ho an'ny besinimaro izy io ary afaka jerena ny efitrano nipetrahan'i Mary, Queen of Scots, rehefa niverina avy tany France izy tamin'ny 1561. £ 12 ny fidirana.
The Scott Monument: Izy io dia tsangambato namboarina ho an'ny mpanoratra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary manome voninahitra ny fahatsiarovana an'i Sir Walter Scott. Manomboka amin'ny taonjato faha-287 izy io ary afaka miakatra ireo dingana XNUMX mankany amin'ny faritra avo indrindra. Ny fomba fijery, mahatalanjona.
Efa niresaka momba izany isika ireo mpizahatany malaza indrindra any London sy Edinburgh, saingy mazava ho azy fa tsy azo ahena amin'izy ireo ny tanàna roa tonta. Misy trano fisakafoanana, tranombakoka, bara ary fiainana ara-kolontsaina manankarena ao amin'izy roa. Fa raha tsy manam-potoana be ianao ary tsy dia manam-bola dia lafo be ny kilao! Anisan'ireo safidy ireo ianao dia voatery hisafidy ary hanao ny lisitry ny manintona anao hitsidika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » firenena » United Kingdom » Tsidiho ny London sy Edinburgh
Toerana 10 any Espaina handosirana ny ririnina mangatsiaka
Ireo toerana fizahan-tany 5 be mpitsidika indrindra tany Madrid tamin'ny 2016